Canada - Discochọpụta obodo ya na ebe ya kacha ju anya | Njem zuru oke
Canada bụ mba dị n'akụkụ ugwu nke North America. Ekwuru na ọ bụ mba nke abụọ kachasị n'ụwa. Nke ahụ kwuru, anyị amatalarị na ọ ga-enwe ọtụtụ akụkụ ga-eleta. Malite na obodo Toronto nke Lake Ontario na-asacha ma na-ahapụ anyị na mpaghara pụrụ iche dịka CN Tower. Ọzọ nke dị oké mkpa obodo bụ Vancouver na site na ya Stanley Park i nwere ike inwe ụfọdụ nke kasị obi ụtọ echiche.
Isi obodo Ottawa bu ihe ozo di nkpa. Ọ nwere ọtụtụ veranda nka na-echezọghị na ị ga-agarịrị na nzuko omeiwu, yana ụlọ ndị kachasị mkpa. Site na mmetụta Europe zuru oke, anyị bịara Québec, yana etiti akụkọ ihe mere eme nke ga-eju gị anya.
Ma na mgbakwunye na obodo kachasị mkpa, ọdịdị na-arụ ọrụ dị mkpa na Canada. Site na Banff National Park, nke dị na ndịda nke Ugwu Rocky, ruo Niagara Falls, nke bụ ihe nkiri zuru oke.
Tụkwasị na nke a, anyị enweghị ike ịhapụ Jasper Park, nke ga-enye gị mkpokọta agba pụrụ iche. Y’oburu n’inweghi ogba aghara, mgbe ahu inwere ike ighapu Capilano Suspension Bridge. Ga-ahụ ya n'anya!
Omenala di iche na Canada
por Daniel eme Ọnwa 7 .
Ọdịbendị ọdịbendị na Canada bụ otu n'ime njirimara na njirimara pụrụ iche nke ọha mmadụ nke obodo a….
Nnukwu Osimiri, okike na eserese
por maruuzen eme Ọnwa 7 .
Canada bụ mba nwere oke ala mara mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ kaadi akwụkwọ ọdọ mmiri nwere ọdọ mmiri, ugwu, osimiri ...
Oge snow nke Canada
Mgbe ị na-ahọrọ ebe ị ga-enwe ezumike, ọ dị mkpa iburu n'uche ụdị ihu igwe, ...
Bọchị nne na Canada
Motherbọchị nne na Canada bụ ezumike ama ama ama ma hụkwa n'anya, naanị karịa nke dị mkpa ma na-agbaso ...
Nri ụtụtụ na Canada
por Daniel eme Ọnwa 12 .
Nri kachasị amasị ndị Canada na-adịgasị iche site na mpaghara gaa na mpaghara ma ...
Nri abalị Christmas na Canada
Nri abalị Christmas na Canada bụ isi ihe dị iche iche nke ezumike ndị a. The efere na-akwadebe maka taa ...
Azu na Canada
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ịkụ azụ salmọn na Canada bụ Osimiri Campbell (British Columbia) ebe ị nwere ike ijide ...
Akwụkwọ Maple, akara nke Canada
por Louis Martinez eme Afọ 1 .
Maple akwukwo, ihe nnọchianya nke Canada, nwere ogologo oge n'azu ya. Nke a laghachiri na narị afọ nke iri na asaa, ...
Ekeresimesi ndị Canada na ọdịnala ya
Ekeresimesi ndị Canada na ọdịnala ya enweghị ike ịchọta ntọala kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị were otu ụdị ebe ...
The Beaver, anụmanụ mba Canada
Dabere na National Symbol of Canada Act, iwu etinyere na 1975, a ghọtara ma kwupụta na beaver ...
Kedu ka esi eme ekeresimesi na Canada?
Kedu ka esi eme ekeresimesi na Canada? Ọ bụ ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị mgbe anyị chere na obodo North America ...
Oge kacha mma iji gaa Canada
Ebe kachasị mma ịgba ọsọ na Canada
Ebe ndị nleta kachasị na Canada
Ofdị gọọmentị nke Canada
Ihe ncheta kachasị mkpa nke Canada
Canada na teknụzụ ozi